2 afọ 2 ọnwa gara aga #56 by ferdiwi
hi bụ n'ebe ọ bụla nkwụnye ịgbanwe joestick si 15 bit na USB nkwụnye m .Ma nwere microsoft n'akụkụ ntụgharị na ọ bụ nke zuru okè ka i mkpa n'ezie mara bụ n'ebe ọ bụla ngwọta maka na i na-agbalị nke ọzọ joestick USB ma ọ bụghị otu ihe ahụ ekele maka niile
2 afọ 2 ọnwa gara aga #57 by rikoooo
M na-eche na nke a kwesịrị na-arụ ọrụ n'ihi na ị https://www.amazon.com/GamePort-Converter-Adapter-Joysticks-Controller-Steering/dp/B00FDOBVZG
2 afọ 2 ọnwa gara aga #58 by rikoooo
My ndudue, o yiri e nweghị nkwụnye dakọtara na Microsoft SideWinder, na nke ga-a akpan akpan joystick
2 afọ 1 ọnwa gara aga - 2 afọ 1 ọnwa gara aga #76 by Gh0stRider203
(Ama dezie dị ka ọ na-enweghị mmasị na ebay njikọ ...)
Site na ihe m na-na na na-agụ na a na eri, dị nnọọ ka ọ na-ewute Me .... ị pụrụ imesị na-enwe ịzụta a dum ọhụrụ osisi
Onwe ya, m ga-ikwu na Saitek X45. Mgbe ọ na-okenye nlereanya Stick & trotul, m na-eji ya maka ọtụtụ afọ na m nnọọ n'anya ya. N'eziokwu, ọtụtụ n'ime My efe efe na-eme na jumbos, m na hụrụ na ọ bụ oké n'ihi na dị nnọọ banyere ihe ọ bụla ụdị ụgbọelu. Ị nwetara ọtụtụ buttons i nwere ike omume na ọtụtụ okpu switches (ohere maka ọbụna obere keyboard ojiji). - 1st njikọ
The ọnụ ala m hụrụ na amazon bụ $ 89.99 + $ 7.49 mbupu. Ebay bụ a otutu obere na $ 24.99, + $ 10.shipping ma ọ gaghị depụtara maka ogologo. Nke a otu ezie bụ naanị osisi & trotul. Ọ dịghị akwụkwọ ntuziaka, ọ dịghị disk. - Ebay item 322399578359
M mere ka ịhụ otu na a bit ọzọ na $ 55 on ebay na nwere ihe nile. Trotul, osisi, ntuziaka (nke m dịghị mgbe BTW akpa ọchị), na CD maka ya. (3rd njikọ) oh na free mbupu. - Ebay Item 222389050446
M anya na a na-enye aka, na m mwute ị na-aga site na nke a!
Nchịkọta ikpeazụ: 2 afọ 1 ọnwa gara aga site na Gh0stRider203.